Inona no atao hoe tetracycline? - BALLYA
Posted on Aprily 9, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Toetra ara-batana sy simika
Inona no ampiasaina amin'ny tetracycline?
Mekanisme miady amin'ny bakteria sy ny mekanisma fanoherana
Fomba fiasa Tetracycline
Ny fototarazon'ny fanoherana Tetracycline
Ny voka-dratsin'ny tetetracycline
Fanandramana imanoosorbent mifandray amin'ny anzima
Tetracycline dia fitambarana biolojika misy raikipohy molekiola C₂₂H₂₄N₂O₈. Kristaly mavo na mavo mavo izy io. Tena marin-toerana ao anaty tany maina izy ireo. Afa-tsy ny chlortetracycline, ny vahaolana aqueous an'ny tetracyclines hafa dia miorina tsara. Ny titracyclines dia mety levona amin'ny asidra malemy, alkaly sns., Mety levona kely amin'ny rano sy alikaola ambany, fa tsy azo afehina amin'ny ether sy ether solika.
2. Kilasy Tetracycline
Anisan'izany ny antibiotika Tetracycline aureomycine, terramycin, doxycycline ary tetracycline. Ny antibiotika Tetracycline dia manana ray aman-dreny firafitra simika mahazatra. Ny Chlortetracycline sy ny oxytetracycline dia samy avy amin'ny tetracycline. Ny voalohany dia chloretracyelin ary ny faharoa dia oxyeracyein. Ny fianakaviana tetracycline dia fitambaran'ny amphoteric-base acid.
3. Toetra ara-batana sy simika
Ny Tetracycline dia manana formula molekiola an'ny C22H24N2O8 ary ny lanjan'ny molekiola 444.45. Antibiotika misimisy ihany io. Izy io dia kristaly mavo misy tsiro mangidy sy teboka mandronono 170 ～ 175 ℃ (lo). Izy io dia mety levona kely amin'ny rano, mety levona amin'ny etanol sy acétone, miorina amin'ny rivotra, saingy mora mandray rano, manalefaka ny tara-pahazavana mahery.
4. Inona no ampiasaina amin'ny tetracycline?
Tetracycline hydrochloride dia antibiotika misimisy-spectrum. Izy io dia misy vokany manakana ny ankamaroan'ny bakteria miabo gram-tsara sy gram-negatif. Ny fifantohana avo lenta dia misy fiantraikany amin'ny bakteria, ary afaka manakana ny rickettsia, virus trachoma, sns, ary misy fiatraikany tsara kokoa amin'ny bacilli grama ratsy. Ny rafitra fiasan'izy ireo dia indrindra mba hisorohana ny fitambaran'ny vatana aminoacyl sy ribonucleoprotein, hisorohana ny fitomboan'ny rojo peptide sy ny synthesis proteinina, ka hanakana ny fitomboan'ny bakteria. Izy io koa dia misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny fifantohana betsaka.
Misy fanoherana eo amin'ny tetracycline sy oxytetracycline. Amin'ny lafiny klinika, dia ampiasaina indrindra amin'ny fivontosan'ny bakteria, trachoma, pertussis, pnemonia, meningite purulent, aretin-koditra, otitis media, sns.
Ny Tetracycline dia nalaina indrindra avy amin'ny volo kolontsain'ireo virtoana Streptomyces na nesorina tamin'ny chlortetracycline. Tsy dia misy poizina izy io. Fa ny mony tetracycline dia mahazatra, toy ny maloiloy, mandoa, tsy fahazotoan-komana, aretina roa heny, misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny taolana sy nify, sns.
Nisy telo ny antibiotika tetracycline. Ny vokatra voalohany: chlortetracycline, tetracycline ary oxytetracycline dia antibiotika voajanahary, izay be mpampiasa noho ny karazany marobe, mora ampiasaina, ary toekarena ara-toekarena.
Taty aoriana, dia fantatra fa ny firafitry ny simika ao amin'ireto antibiotika ireto dia tsy marin-toerana, ary mora tohina izy ireo. Ny fanoherana ny bakteria mahery vaika dia nanjary filàna maika hamorona antibiotika tetracycline vaovao. Tamin'ny alàlan'ny fanovana ara-drafitra maro dia hita ny antibiotika tetracycline semi-synthetic faharoa izay soloin'ny doxycycline sy minocycline. Ity karazana antibiotika ity dia lipophilic kokoa ary manampy amin'ny fitrohana sela. Na izany aza, tato anatin'ireo taona faramparany dia niseho tsy tapaka koa ny karazana aretina tsy mahazaka zava-mahadomelina, izay mametra ny fampiharana ara-pahasalamana azy.
Tamin'ny taona 2005, ny US Food and Drug Administration (FDA) dia nanaiky ny varotra tigecycline, izay misy fiatraikany lehibe eo amin'ny Staphylococcus aureus mahazaka zava-mahadomelina ary vancomycin-bakteria maharitra. Ny fisian'ny antibiotika glycylcycline solontenan'io dia nanamarika ny fahaterahan'ny tetracycline fahatelo.
Satria ny tobim-panafody ilaina amin'ny tetracycline an'ny taranaka fahatelo manohitra ny bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina dia ny fananana karazana substituents amin'ny peratra D, toy ny glycyl, dimethylamino, fluoro sns. fomba semi-synthetic teo aloha. Ilaina ny mamolavola fomba famolavolana vaovao sy mahomby amin'ny fananganana taolana D-ring maro tetracycline. Izy io koa dia manamarika ny fikarohana tetracycline avy amin'ny semi-synthesis ho lasa vanim-potoana vaovao misy synthese total.
1. Fomba fiasa Tetracycline
Ny mekanika fanoherana ny bakteria maro dia ny manelingelina ny fizotry ny fizarana sela ao anatiny na ivelan'ny bakteria. Ny antibiotika Tetracycline dia mamorona fitambarana azo ovaina miaraka amin'ny subunit 30S an'ny ribosome bakteria hanakanana ny synthesie proteinina ary hisy fiantraikany amin'ny bakteria. Rehefa ambany ny fifantohana antibiotika, dia hikatona koa ny fifamatorana mifanohitra amin'ny fihodinana, ary hitohy ny fampifangaroana proteinina bakteria.
Ny Tetracycline koa dia afaka manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina mitochondrial amin'ny alàlan'ny fatorana ny subunit mitochondrial 70S. Ny Tetracycline dia manana fahaiza-mamatotra marefo amin'ny 80S subunit an'ny ribosome eukaryotic, ka ny fahaizana manakana ny synthesie proteinina ao amin'ny sela eukaryotic dia malemy ihany koa. Mety ho izany no antony mahatonga ny tetracycline hanan-kery mahery vaika nefa tsy dia misy vokany ratsy amin'ny olombelona.
2. Mekanisma fanoherana
Satria ny antibiotika tetracycline dia be mpampiasa amin'ny fitsaboana aretina amin'ny bakteria amin'ny olona sy ny biby nandritra ny fotoana ela, ny aretina tsy mahazaka zava-mahadomelina dia niseho tato anatin'ny taona vitsivitsy. Misy rafitra telo lehibe fanoherana ny zava-mahadomelina: efflux mavitrika amin'ny tetracycline amin'ny alàlan'ny pump efflux (toy ny protein tet A); fiarovana ny ribosome bakteria (toy ny protein tet M) hampiala ny tetracycline amin'ny subunit 30S; Hydrolisis enzymatika.
Noho ny fampiasana tetracycline maharitra dia hita ny bakteria mahazaka tetracycline. Ny fanoherana ny bakteria amin'ny tetracyclines dia vokatry ny fanoherana. Aorian'ny fahazoana ny fahatsapana tany am-boalohany ny fototarazon'ny fanoherana dia hatsangana ny bakteria mahazaka fanoherana ary misy io fototarazo fanoherana io ao amin'ny plasmid na translocation.
3. Ny fototarazon'ny fanoherana Tetracycline
Mekanisme ny hetsika: ny Tetracycline dia afaka mamatotra proteinina iray amin'ny subunit 30S an'ny ribosome, amin'izay manakana ny fizotry ny famindrana ny ribosome. Izy io dia mampiditra proteinina mifatotra amin'ny membrane izay misy asidra amine 399, izay manakana ny tetracycline tsy hiditra sela.
Tetracycline dia zava-mahadomelina solontenan'ny antibiotika tetracycline, miaraka amina karazana bakteria midadasika, ary ny vokatra azo avy amin'ny bakteria amin'ny ankamaroan'ny bakteria Gram-positive sy ny ratsy.
1. Soritr'aretina gastrointestinal
Ity dia iray amin'ny voka-dratsin'ny fandraisana tablette tetracycline. Ny marary sasany dia hiaina ambaratonga hafa amin'ny fisaleboleboana, mandoa, mivalana, tsy mahazo aina amin'ny kibo ary soritr'aretina hafa rehefa avy naka tablette tetracycline. Manoro hevitra anao ny hanao fanazaran-tena mety rehefa avy mihinana ny fanafody ary aza mijanona eo am-pandriana avy hatrany mba hampihenana ny fahasosoran'ny tetracycline mankany amin'ny lalan-dra.
2. Toxicity ny taova
Marary mandray tablette tetracycline, indrindra mandritra ny fotoana maharitra, dia manana mety be ny fihenan'ny atin'ny tavy sy ny hepatotoxisialy ary tablette tetracycline mety hiteraka pancreatitis koa. Manantena aho fa hitandrina ny rehetra.
Maka takelaka tetracycline, ny marary dia hiaina maimaika maculopapular sy erythema, ary ny marary sasany dia hiaina soritr'aretin'ny urticaria na purpura mahazaka, na hampitombo ny soritr'aretin'ny aretin-koditra voalohany. Ary marary vitsivitsy dia hanana photosensitivity rehefa mandray tetracycline. Ampirisihina ny marary handray takelaka tetracycline hisorohana ny fihanaky ny vatana.
4. Rafitra rà
Rehefa avy naka takelaka tetracycline dia hiteraka soritr'aretina toy ny thrombositopenia sy leukopenia, ary ny marary sasany dia hanana soritr'aretin'ny hemolytic anemia. Manoro hevitra anao fa ny fitsapana famerenana mifandraika dia tokony hatao tsy tapaka aorian'ny fisotroana tablette tetracycline.
5. Central Rafitra
Rehefa avy naka takelaka tetracycline ny marary sasany dia hiharan'ny tsindry intracranial toa ny aretin'andoha, mandoa, sns. Ny marary dia tokony hampiato avy hatrany ny fanafody raha sendra misy ireo soritr'aretina ireo.
Ny marary sasany izay mandray takelaka tetracycline dia hanana soritr'aretina toy ny hyperphosphatemia sy acidosis, ary ny marary sasany kosa dia hiaina soritr'aretin'ny voa voa mafy.
7. Aretina roa
Ny fampiasana tablette tetracycline mandritra ny fotoana maharitra dia mety hitarika amin'ny fanoherana zava-mahadomelina ary hampitombo ny aretina amin'ny lalan-dra, ny lalan-dra ary ny lalan-pisefoana.
Ny Tetracycline dia misy fiatraikany amin'ny fitomboana sy ny fivelaran'ny taolana sy ny nify, ary mety hiteraka koa nify tetracycline. Noho izany, ny vehivavy bevohoka, ny tanora ary ny vehivavy mampinono dia voarara tsy mampiasa an'io fanafody io.
Ny fomba famaritana ny antibiotika tetracycline ahitana indrindra ny fomba fanakanana mikraoba, fomba famakafakana receptor microbial charme, immunoassay mifandray amin'ny anzima, spectrophotometry, chromatography electrophoresis capillary, chromatography sosona manify, chromatography ranon-javatra mahomby, chromatography-spectrometry faobe sns.
Rehefa avy nalaina sy nodiovina ny santionany, ny antibiotika tetracycline azo sarahina amin'ny chromatography sosona manify na chromatography ranon-javatra, ary avy eo dia voafaritry ny rafitra spectrophotometric, fluorescence na rafitra detection spectrometry marobe.
1. Fomba mikraoba
Ny fomba mikraoba dia fomba fandalinana nentim-paharazana amin'ny famaritana tetracyclines sy antibiotika hafa. Matetika ny zavamiaina bitika dia manana fahatsapana voajanahary amin'ny antibiotika tetracycline. Izy io dia mora tohina amin'ny tetracyclines sasany, noho izany dia mbola ampiasaina ny fomba fanakanana mikraoba. Bacillus cereus ATCC 11778 dia mikraoba mahazatra ampiasaina amin'ny famakafakana ny tetracyclines. Ny fahatsapany ny chlortetracycline dia 0.005 mg / L, ary 0.025mg / L ny tetracycline sy oxytetracycline, 0.001 ～ 0.002 mg / L ny minocycline.
Raha ampitahaina amin'ny fomba famakafakana hafa, ny fomba fanakanana mikraoba dia tsotra ampiasaina, ambany ny vidiny, ary tsy mila zavamaneno be pitsiny sy ny fizotran'ny fizotran'ny santionany sarotra, noho izany dia mety amin'ny fandefasana santionany maro. Ny fatiantoka lehibe indrindra amin'ny fomba famoretana mikraoba dia ny tsy ahafahany manavaka ireo karazana tetracyclines manokana, noho izany dia sarotra ny manatanteraka famaritana habetsahana.
2. Fanandramana imanoosorbent mifandray amin'ny anzima
Ny fanandramana imanoosorbent mifandray amin'ny anzima dia azo ampiasaina hamantarana antibiotika tetracycline amin'ny ronono. Tetracycline bovine serum albumin conjugate dia ampiasaina amin'ny fanomanana antibody, ny conjugate tetracycline-casein homologous dia ampiasaina ho toy ny reagent embedding, ary ny peroxyid anti-bitro IgG-horseradish peroxidase dia ampiasaina ho toy ny antibody faharoa.
Ny santionan'ny ronono dia nanjary afovoany, natsonika tamin'ny buffer fosfat tamin'ny refin'ny 1:30 farafahakeliny, ary avy eo nofaritan'ny immunoassay anzima. Ny faran'ny detection dia mety hahatratra 5 ng / g. Satria ny antibody ampiasaina amin'ity fomba ity dia mifamatotra mafy amin'ny chlortetracycline Noho izany, na dia tsy ampiasaina hitadiavana tetracyclines aza io fomba io, ny faran'ny detection ho an'ny chlortetracycline dia ambany hatramin'ny 5 ng / g. Noho ny fisian'ny fihenan-tsofina sy ny tahan'ny fiheverana diso diso, ny immunoassay dia matetika no ampiasaina amin'ny fomba fitiliana voalohany indrindra amin'ny fitiliana tetracyclines.
Inona no atao hoe tetracycline? Tamin'ny andro voalohany namoronana tetracycline dia ny filazantsaran'ny zanak'olombelona. Namaha aretina sarotra maro tamin'ny fitsaboana tamin'izany fotoana izany. Ny antibiotika dia niharan'ny herisetra ary nanjary fanoherana zava-mahadomelina noho io "efficion curative magic" io. Ary ankehitriny, ny fomba famahana ny olan'ny fanoherana tetracycline dia ho olana amin'ny zanak'olombelona.